AndroBox - Yakapenga Mumba Varaidzo
Xiaomi Mi Bhokisi S
Posted on 06 / 04 / 2020 08 / 04 / 2020 by Androbox
Tora zvako zvakachipa kubva pano:
Posted in Android Bhokisi, Reviews, Video2 Comments
NVIDIA SHIELD TV | Kutenderera Midhiya Player ine Remote & Game Mutongi
Tora kubva kuAmazon NVIDIA SHIELD TV
Yakabatanidzwa paGoogle Hupenyu - Svika zvese zvemukati maGoogle zviratidzike zvakanaka neGoogle Mubatsiri, goverana ako Google Mapikicha mu4K, nekukanda maapplication ako aunofarira kuTV yako neChromecast 4K.
4K HDR Powerhouse - Tarisa Netflix uye Amazon Vhidhiyo mune inopenga 4K HDR, uye YouTube, Google Play Mafirimu & TV, uye VUDU mu4K. Zvirongwa zvakaita seHBO Zvino, Spotify, uye ESPN zvinosangana nezvinodiwa zvako zvevaraidzo.
NVIDIA-Powered Gaming - Cast mitambo kubva kune yako GeForce-powered PC kuenda kuTV yako mu 4K HDR pa60 FPS. Tora NVIDIA-powered gore rekutamba mitambo pane zvinodiwa neGeForce NZVO. Uye unakirwe nemitambo yega yega Android chete paSHIELD
Smart Imba Yakagadzirira - Google Mubatsiri inokubvumira kudzora varaidzo yako uye smart imba nezwi rako. Wedzera SmartThings Link kune isina waya unobatanidza magetsi, vatauri, thermostats, uye zvimwe zvakawanda.
Posted in Android Bhokisi, Reviews, VideoTagged androbox, admin bhokisi, nvidia, Nvidia Shield TV3 Comments
Posted on 22 / 09 / 2017 10 / 11 / 2017 by Androbox
GearBest Xiaomi Mi TV Bhokisi
Posted in Android Bhokisi, Reviews, VideoTagged androbox, admin bhokisi, Xiaomi MiLeave mhinduro
Mocute 054 bhuronzi gamepad Wireless mutambo Kubata Anodzora
Posted on 22 / 09 / 2017 27 / 08 / 2020 by Androbox
Tora zvako zvakachipa kubva pano Mufananidzo 054
Posted in zvishongedzo, Reviews, VideoTagged MAKARALI USB, Controller, Kubata Game, Wireless, Xiaomi Mi, Xiaomi Mi Wireless Bluetooth Game Handle MutongiLeave mhinduro
Yoka TV KB2 PRO Yakakwana Ongororo
Posted on 05 / 03 / 2017 23 / 12 / 2017 by Androbox
Tora bhokisi rako rakachipa kubva pano
Posted in Android Bhokisi, Reviews, Video3 Comments
H96 Pro Uyezve Dzose Ongororo
Posted on 03 / 03 / 2017 23 / 12 / 2017 by Androbox
Tora bhokisi rako rakachipa kubva pano H96 Pro +
Posted in Android Bhokisi, Reviews, VideoLeave mhinduro
Mhepo Mouse 3 mu1
Posted on 02 / 03 / 2017 23 / 12 / 2017 by Androbox
Tora yako Mouse Mouse yakachipa kubva pano AirMouse
Posted in zvishongedzo, Reviews, Video1 Comment
Akapusa Home Varaidzo Shanduko
Inoitei Android Bhokisi?
Seizvo zita rayo rinoratidzira, Android Bhokisi rakavakirwa pane imwechete Android software inowanikwa panhare mbozha, asi yakagadziriswa kuti ishande paterevhizheni kutenderera zvishandiso.
Android Bhokisi rinoita chero TV kuve Yakangwara kupfuura smart, zvakafanana nekubatanidza yakanakisa smart foni kana piritsi pane steroids ine hombe screen TV kana Projector skrini uye chero chero rudzi rweremote control kunge mbeva, keyboard, Gyro mhepo mbeva, mutambo mutambo, zvakajairika TV kure nezvimwe kuwana mukana wekunakidzwa wevashandisi mushandisi mune ramangwana. Iwe haudi PC inodhura kana Game Mabhokisi zvakare kuti ukwanise kuve neakanakisa varaidzo. Kubatsira kukuru kweiyo Bhokisi reApple ndiko kusarudza kuisa chero Google play app uye Kodi.
Uine Kodi iwe une mukana wekutarisa chinenge zvese zvemahara uye pasina kunyoreswa senge TV dzinoratidza, Mafirimu, Mhenyu TV chiteshi, Torrents, Youtube nezvimwe ...
NeGoogle Play chitoro unogona kuisa chero Android Game uye uchitambe paTV yako uchishandisa chero mutongi mutambo, keyboard kana mbeva. Kana iwe unogona kushandisa iyo Miracast sarudzo yekutarisa yako skrini uye tamba iyo chero mutambo kubva kune yako smartphone pane skrini huru uchishandisa yako smartphone semutongi.
Unogona kuisa IP Tv zvirongwa kuti utarise TV, kana kushandisa Netflix
Uyezve TV inoratidza uye mabhaisikopo, Android TV inoita kuti iwe utambe mitambo, zvakanyanya sePlayStation TV uye Amazon Fire TV ita. Android TV ichavimba neGoogle Play Store kuendesa zvirimo, asi kutsvaga kwacho kuchabatanidzawo kuburikidza nechitatu rechitatu kutandanisa masevhisi akaita seNetflix pazvinenge zvakakodzera.
Kana iwe uine Netflix, Blinkbox kana Prime Instant Vhidhiyo yakaiswa pane Android TV uye iwe ndokumbira kuti utarise mafirimu anotaridza Cate Blanchett, Android TV inofanira kutarisa kuburikidza neaya ese kuti uone zviripo.
Nomuzvarirwo, iwe uchave zvakare kukwanisa kuona TV nguva dzose, kana izvo zvichidirana chikepe chako.
Kufanana neChromecast, Android TV inowedzerawo kaviri secracker ine yayo Cast maitiro. Saka vashandisi vanogona kuwana zvemukati pane yavo mobiles kana Chrome browser uye ikande iyo kuGoogle TV yavo, hapana kunetseka.
Posted in Android Bhokisi3 Comments
Airmouse 4 mu1 kure T6 $21.11